Ime na Robotic Tank nhicha Ngwọta | ROV
Ime na Robotic Tank nhicha Ngwọta
ROV na Remote tank nhicha Systems
Ndị na-abanyeghị usoro Tank ihicha
Tank nhicha ngwaahịa NchNhr
Super Manway egbe ala
STRIKERANYAN TANKA ROV
Tanksweeps 18-anụ ọhịa
Tanksweeps 8-anụ ọhịa
Sistemụ Iwepụta mmanụ
Tank ọcha video Library
Twitter.com instagram.com facebook.com youtube.com pinterest.com njikọin.com tumblric flickr.com
ROV na Robotic Na-abụghị Nwoke Ntinye Nhicha Systems
Remote na Robotic tank na-adịghị emerụ ahụ yana usoro mgbake mmanụ. Kachasị Ntinye Pọtaghị Nchema na Sisọmpị Mmanụ Ala dị ebe a na ebe a na njedebe maka ebumnuche ndị nchekwa ọpụpụ ọpụpụ maka ndị niile na - adị ọcha.
Mwepụta Sistem Iweghachite Mmanụ na rụpụta
“PRO-LINE HYDRALINK na -egosi na ha na-achị ụwa na imewe na rụpụta nke na-abụghị kpasasịa Roboti na Ime nke nhicha na Mbelata Sistem Sistem"
Hydlọ Ọrụ Hydraulic na Fluid Flowers
NIILE NA-EKWU NIILE NA EGO NA-AKW DKWỌ AKW BYKWỌ AKWESKWỌ AKW ANDKWỌ
Anyị Mmeputa na-eme Tank ihicha oge a-nchekwa-dị irè maka TANK nhicha na ndị nwe Tank
Ndị ọkachamara n'ihe banyere igwe na ọkụ ọkụ na nke Ọkụ eletriki
Bịa gwa anyị okwu banyere ihicha tankị na mgbake mmanụ gụnyere ntinye mmadụ, nke dịpụrụ adịpụ na nke robotik. Onye oru anyi zuru oke na ndi okacha amara Tony Bennett malitere nhicha mmanu na mmanu ndi ozo na France na 1976 ma n'oge na-adighi anya kpebiri uzo di nma, odi nma ma di mfe karie ime oru a. Tony tinyere aka na imepụta nke nhicha tankị dị iche iche gụnyere sistemụ ntinye mmadụ na usoro mgbake mmanụ. Nnukwu ahụmahụ ya na ụlọ ọrụ a na-enye ya ihe ọmụma iji nyere ndị ahịa aka ịghọta ihe dị ha mkpa iji nweta na otu esi eme ya nke ọma na n'enweghị nsogbu. Tony anwalewo ọtụtụ echiche nhicha tankị ma mara nke ọma ihe na-arụ ọrụ na ihe na-adịghị arụ ọrụ. Kpọọ ma ọ bụ zitere Tony ozi maka nkata.
Imeputa bu otu n’ime anyi ike
Site na otu ndị injinia ọkachamara ọkachamara raara onwe ha nye, onye injinia na-emepụta mmiri mmiri, injinia eletrọniki, onye njikwa QC na ndị ọrụ aka nwere nnukwu ụlọ ahịa ụlọ ọrụ PRO-LINE HYDRALINK bụ ụlọ ọrụ pụrụ iche nke wuru aha ya na ogo nke ya ngwaahịa. Ikike anyị nwere injinia / imewe, chepụta ma chịkọta akụrụngwa ọhụrụ bụ 2nd ka Ọ BONEGHONE. Tinyere imepụta ngwaahịa nke aka anyị, anyị na-ewu akụrụngwa anyị niile n'ụlọ nke na-enye anyị ohere ịmepụta ngwaahịa ndị ebumnuche na-ebugharị NA ịchekwa ogo dị elu.
Ike na ulo oru ike
Nnukwu mmanụ mmanụ dị n'ọdụ ụgbọ mmiri Power, ROV na Robotic Materiel na-arụ na Ngwá Ọrụ Nuclear a na-eji ngwa anyị eme ihe zuru ụwa ọnụ.
Industrylọ Ọrụ Na-egwu mmanụ bụ otu n'ime Ọrụ anyị
N’elu ala ebe nchekwa nchekwa, tankị dị n’ime ala, mmiri na Vessel tankị - Usoro sistemụ anyị ga-asacha ha niile site na iji Nweta Ime Ebe na Robotics iji hụ na nchekwa dị oke mkpa.
Ajụjụ na azịza ọtụtụ ugboro
01 Ndi Tanksweep nozzles eweputara n'olulu e gbuturu agbutu ma obu site na elu ulo erimeri
Tanzọ nke Tanksweep agaghị enwe mgbagwoju anya na ụzọ ndị a na - anaghị agacha nke ọma n'ihi ọtụtụ ihe 1. Nozzles dị obere ma nwee oke ikike ha ịgafe nnukwu mmiri na nrụgide na-eju afọ ebe 18 inch Tanksweep nozzle ọ bụla na-anapụta 660m3 / elekere na nrụgide mmanya 10. 2. Nozzles ndị a na-atụgharị na-enweghị njedebe ma enweghị ike ịchịkwa ma ọ bụ duzie ha ebe enwere ike ịchọrọ ha ebe Tanksweep nozzles na-eche ihu ma nwee ike ibugharị n'ụzọ dị mfe site na wiil dị mfe iji gaa kpọmkwem ebe achọrọ ha. 3. Nozzles dabara na akwa mmiri anaghị amaba na ya mere tank kwesịrị itinye ọrụ ebe a na-eji tanksweeps rụọ ọrụ mgbe mmiri dị na tank dị 1.5m kacha dị elu karịa nke tanksweep nozulu, nke a na - ebido na uzu mmiri si na pọmpụ enweghị ike ịkụghasị Ọkpụkpụ mmiri n'ime ikuku ma ọ bụ ya mere na ọdịghị mkpa ịbanye n'ime mmiri. N'ezie ọ bụrụ na iwu obodo chọrọ ka a kpochaa tank naanị ma ọ bụrụ na etinyeghị ya n'ọrụ, ọ ga-ekwe omume. 4. Nozzles dabara na akwa mmiri na-enwe ike ịkpaghasị sludge n'ime obere oge site na nozulu ahụ wee bụrụ nke ọma na mpaghara nozzles, nke a pụtara na iji nwee ike ikpuchi tank niile ọtụtụ mkpa nozzles kwesịrị idowe mana nke N'ezie a gaghị enwe ike ịchịkwa ntụziaka ha ebe a nwere ike iji tanksweeps rụọ ọrụ nke tanksweeps ruo 50m dayameta, tank dị n'etiti 2 na 50m chọrọ 80 x tanksweeps, na tank nke 3-80m chọrọ 100 x tanksweeps. 4. nozzles ntinye ụlọ chọrọ cranage na ụmụ nwoke n'elu ụlọ nke tank ebe ndị Tanksweep na-esonye na ntanetị ya, ya mere ọ dịghị mkpa ka crane nozzles na hoses n'elu ụlọ ma ọ bụ zigara ndị nwoke ka ha rụọ ọrụ na mpaghara a dị oke egwu. 5. N'ihi Tanksweep nozzles nwere akụkụ zuru ezu na n'akụkụ ngagharị, a na-ekpuchi tanki ahụ site na iji igwefoto na-eme ka ọ bụrụ ebe a chọrọ ka ọ dị. Iji tufuo ma mee ka ihe ndị dị n'ime tanki rụọ ọrụ were mee ka ọrụ niile rụọ ọrụ nke ọma.
02 Ọ bụrụ na ọkwa dị n'ime tank dị n'elu manways kedu ka esi eme Tanksweeps
Tanksweeps na-arụ ọrụ site na ntinye n'akụkụ na tank site na manways site na iji 3 tanksweeps (na tank dayameta 80m) Ka ọkwa ahụ dị n'elu mana ndị a enweghị ike iwepu. Ya mere nnweta maka tanksweeps n'ime tank ga-abụ site n'iji flanges Proline Hydralink Coldtap. A na-adọnye flanges oyi na-eme ka ọ dị na mkpuchi nke manway site na mbụ ihicha mkpuchi mkpuchi nke agba na ajari iji hụ na gasket ga-enwe akara ziri ezi na flanges coldtap. Mgbe ahụ, a na - ewepụ ihe ndị ọzọ na - emechi na mkpochi ụzọ. Mgbe ahụ, a na-etinye flalop ahụ na-acha oyi yana oghere kwesịrị ekwesị na mkpuchi ahụ ma echekwa ya. Ugbu a, a na-ewepụ mkpụrụ na bol ndị ọzọ ma dochie ya na mkpụrụ ahịhịa pụrụ iche na bolts a na-ejikwa flanges na-acha ọkụ na echekwara ya. Igwe ọkụ mmiri a na-ajụ oyi nwere ahịhịa ahịhịa nwere 18 inch flange dabara ya. Igwe eji emechi ọnụ ụzọ BULA ỌGBARA 18 dị n'otu ma tinyekwa ya na gasket. A chọrọ igwe eji egwu mmiri ugbu a, nke a nwere ike ịbụ onye na-ahụ maka ọrụ na mpụga bụ ọkachamara na mmiri ọkụ ma ọ bụ jiri igwe na-egwu mmiri Proline Hydralink. Igwe a na-egwu mmiri dabara na valvụ inch 18 ya ma meghere valvụ ahụ na-enye ohere ka igwe nhichapu ahihia nke ochie ahụ site na mkpuchi manway. Ozugbo egburu ịkụda ahụ na-akpọpu ya na dereji ma kuchie valvụ 18. Anapupu igwe ihe a ma dochie ya site na tanksweep site na iji nochie ya. A na-akwado tanksweep ma jiri ya site na nkịta 4 aka. . The tanksweeps jikọrọ site na ebu ibu na-enyere ndị iyo dị n'akụkụ ara mmiri nke tanksweep ụlọ. Enwere ogwe-aka di n’akụkụ abụọ ya ka enwere ike iji kacha adaba adaba wee debe nke ọzọ. Nyocha ahụ nwere njikọ na mmiri mgbapụta na nkwụpụta mmiri ahụ jikọtara n'akụkụ nnyefe nke tanksweep.
Kpọọ Anyị Ma ọ bụ Dejupụta Fordị Maka Ajụjụ Ọ bụla
Nwere ajụjụ ọ bụla?
UK (+44) 7951930633 ma ọ bụ USA (+1) 346-247-8679 ou France (+33) 975170121 ou Bresil (+55) 2135133615
Oge Ọrụ Anyị:
Mon Ka Sat 8am ruo elekere asatọ nke ehihie
PRY-LINE HYDRALINK ga-enye gị akụrụngwa kachasị mma nke na-ezute atụmanya gị na oge na mmefu ego.
Ọ bụrụ na Needchọrọ Ngwọta Pụrụ Iche Pụrụ Iche Anyị Nwere Maka Anyị
Ebe ọ bụ na 1975 ndị ​​ọrụ PRO-LINE HYDRALINK emeela aha ọma maka imepụta akụrụngwa eji arụ ọrụ dị elu maka iji rụọ ọrụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ gụnyere gas mmanụ na hydraulic site na iji nnukwu ihe ọmụma ha nwetara n'ọtụtụ afọ na ụlọ ọrụ ndị a.
Isiokwu WordPress Isiokwu 2019 PRO-LINE Hydralink Webmaster tbfrance@gmail.com nwebisiinka PRO-LINE HYDRALINK 2020.	Chepụta & Nke mepụtara VW Gburugburu